Abamba Ukushisa for abashayeli bamaloli - ayisekho okunethezeka, kodwa ukuswela, ikakhulukazi labo abahlala ezindaweni ezisenyakatho nendawo ezizobekwa wezolimo okuyingozi. Abanye abalandeli sikhule imifino nezimbali kakade abanikazi ujabule ngakho, khona kuphela uya ukuthenga noma ukwakha bebodwa.
Umuntu ayehlala emzini nize lizwe kuphela ngezimpelasonto, kunzima ukulawula izinga lokushisa kule abamba ukushisa. Ngaphezu kwalokho, i-elikhulu ekukhuleni kwesihlahla nasekuvezeni izithombo, kubalulekile ukuqeda le Isivuvu kuphakama emva ngenkasa zokugcina ngaphansi isenzo okushisa ephakeme. Yiphathe kuyasiza ukupholisa, nakho kunciphisa amathuba izifo zezitshalo kuvimbela ukukhula izinambuzane.
Elula futhi kunengqondo ukufaka umshini ukuze ukupholisa of zokugcina. Siqukethe ezosetshenziswa ukuvula izimbobo nge okwandisa izinga lokushisa kule abamba ukushisa ngaphezu degrees 25 futhi Ukuvalwa lapho izinga lokushisa sehliselwe degrees 16.
Umshini ukuze pholisa zokugcina usebenza engenawo ugesi noma amabhethri. indlela eyisisekelo isebenzisa isimiso ukunwetshwa uketshezi kule piston ejection futhi termotsilindre ngesikhathi bafudumale. Nge nokuncipha lokushisa, uketshezi onomfutho, ngenxa yalokho, le piston lehliselwa, ukuvala iwindi. Njengoba uketshezi ukusebenza, ngokuvamile amafutha isetshenziswa.
Umshini ukuze pholisa zokugcina kufanelekile yimuphi umklamo. Kulula ukufaka. Kodwa akufanele sikhohlwe mayelana amanye amaphuzu. Termotsilindr kudingekile ukuze kuvalwe ilanga isihlangu, kangangokuba ukufuthelana ngu emoyeni kule abamba ukushisa, kodwa hhayi elangeni. Buyadingeka ezengeziwe zokuphepha ibhande, exhunywe iwindi, ukuvikela umoya. Ukuze usethe i-lamasu, kubalulekile ukulinda ukusungulwa izinga lokushisa abamba ukushisa at degrees 25, futhi kuphela ke qinisa nut ekhethekile ku ekupheleni isilinda.
Uma kukhona intshisekelo kanye nekhono, ungenza emshinini wakho siqu pholisa zokugcina. Ngokwesibonelo, amamitha amabili kusuka tube ensimbi, lesi mfutho ukushaqeka emnyango ezingemuva Zhiguley (isudu ephukile), kanye samafutha angcolile.
Okwamanje i-greenhouse ethandwa kakhulu futhi okusebenzayo polycarbonate kokuba eziningi eziwusizo phezu ingilazi. Lwenza isimo izitshalo. Yeqa kwelanga refracts kubo ngaleso engele ezahlukene, isb, izitshalo zithole ukukhanya okuvela ezinhlangothini ezihlukahlukene.
Polycarbonate ngoba zokugcina ulula kakhulu ukwedlula ingilazi. He is umthelela ukumelana, engangenwa umlilo, amelana UV futhi weatherability kakhulu. I polymeric impahla - umsindo kakhulu futhi yisivikelo ezishisayo. Lapho imishini akusho sokudiliza iphuma kalula imiqulu kanye, kakhulu, ishibhile kunamanye izinto. Zokugcina Polycarbonate kulula ukuthutha bese ufake. Abanaso inkungu up, musa ukushintsha umbala, ungakwazi ukumelana nomoya, isichotho neqhwa ukujiya. Ingabe iminyaka eminingi ngaphandle kokushintsha impahla yayo.
zokugcina Polycarbonate ngesibhamu i ukupholisa - ikhambi ilungelo etafuleni njalo babe imifino, namavazi babe izimbali ezinhle.
Indlela yokwenza bee zamagciwane Amathiphu imfundamakhwela beekeeper
Ngiyinika kanjani ukushintsha izilungiselelo yosesho lwe-Google Chrome?
Ukulungiselela "Asparkam" (amaphilisi): yokusetshenziswa, izinkomba kanye nemiphumela engemihle